कांग्रेस नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ :संविधान संसोधन गर्छु, माफ पाउँ भनेको छु र ? किन विरोध?
Tuesday, 15 May, 2018 6:39 PM
काठमाडौं, १ जेठ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग लम्पसार परेको बेला चुप लागेकाहरु समानताका आधारमा सार्वभौम सम्बन्ध कायम भएपछि अत्तालिएर अहिले लम्पसरवाद देख्न थाल्नु बिडम्वना भएको बताउनुभएको छ ।
युवा संघ नेपालको स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित ‘समृद्धि र सुशासनका लागि युवा अभियान’ कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सरकार र नेताले नेतासँग कुरा गर्दा घुँडा टेक्नु पर्दोरहनेछ भन्ने आफूले देखाएको बताउनुभएको हो । उहाँले भारतविरुद्ध उफ्रिनुभन्दा नेपालको हित हेर्नु नेपालीको कर्तब्य भएको बताउनुभयो ।
‘भारतका बिरुद्ध उफ्रिनु हाम्रो काम होइन । हिजो पनि र आज पनि नेपालको हित हेर्नु हाम्रो कर्तब्य हो । आफैं लम्पसार परे, कोही बोलेनन् । जनताले कराए । तर अहिले आएर बल्ल लम्पसार देखे’ प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताका अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो,‘सरकारले सरकारसँग, नेताले नेतासँग कुरा गर्दो हुँदोरहेछ । घुँडा टेक्नुपर्दैन रहेछ भन्ने हामीले देखायौं ।’
उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजस्तो संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता भारतसँग राख्दै माफ पाउँ भनेर आफूले नभनेको भन्दै कांग्रेसको बिरोधको अर्थ नभएको बताउनुभयो । ‘मैले संविधान संसोधन गर्छु, माफ पाउँ भनेको छु र ? किन बिरोध ? सन्तुलित सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने अव हामी देखाउँछौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो,‘नेपालको अखण्डताको सम्मान गर्छौं भन्दा उनीहरु आत्तिएका छन् । र, यस्तो भन्दैछन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले एकतर्फी बाँध बाँधेर डुवाउँदा नबोल्नेहरु आज हामीले त्यसबारे प्रष्ट कुरा राख्दा अत्तालिएको बताउनुभयो । ‘हिजो बाँध बाधेर डुवानमा पारे । आज हामीले त्यो काम अघि बढायौं । त्यो धेरैलाई दुखेको छ । व्यापार सम्बन्धमा भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा भइरहेको छ । व्यापार घाटा पनि कम गर्नेछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले युवाहरुलाई सृजनात्मक काममा लाग्न सुझाव दिंदै सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले साँचो अर्थमा सरकारले सिण्डिकेट तोडेको भन्दै सबैखाले सिण्डिकेत तोड्ने बताउनुभयो । ‘साँचो अर्थमा सिण्डिकेट तोडियो । अव कालाबजारी, भ्रष्टाचारीबिरुद्धमा लाग्नुहोस् । तराईमा पुग्नुहोस् । ६० प्रतिशत निरक्षर जनतालाई केही गर्नुहोस्’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सबैलाई सम्मानजनक रुपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।